Bottle Kutaurisa Machine - Micvd.com
Mune chero ipi zvayo yekuisa yemvura yakarongedzwa, kuve nemavhenji akavimbika e cap ndiwo anokosha. Michina iyi inoona kuti mushure mekunge mabhodhoro aenda mumudziyo wechinhu chekuchenesa, anosungwa zvakakwana uye akagadzirira danho ravo rinotevera muketani yekugadzira, zvingave zvinoreva kutengesa kune anoendesa, kutengesa zvakananga kumutengi, kana neimwe nzira. Uchishandisa bhodhoro capper kubva NPACK inobatsira kupedzisa mutsara wako wekutakura uye ichabatsira kuona kuti zvigadzirwa zvaunotengesa zvakaiswa mumhando yepamusoro.
Inotendeka, Homborera Bhodhoro Kura Zvombo
Anoshanda mabhodhoro ekuchengetedza mapaini akakosha mumadzi ekupakata masisitimu. Zvichienderana nerudzi rwezvigadzirwa zvinoda chigadzirwa, mhando dzakasiyana dzemakina edhispavhu dzichabatanidzwa mukugadzirisa kwemapombi, kusanganisira michina yekuwanikwa kwemapoke. NPACK inotakura akati wandei emishini
Kubata mabhodhoro Zvinyatso Neakavimbika Capper Machina
Kune akawanda akasiyana marudzi ezvigadzirwa anogona kushandisa NPACK mabhodhoro ekurapa emapapu. Nyorera macaps kune ehukuru hwakasiyana uye chimiro chemabhodhoro ane:
Acids uye corrosives
Zvidimbu zvehupfu uye sosi
Hutano uye zvigadzirwa zvekunaka
Iwe unogona kusanganisa michina yemapatani akasiyana-siyana kuti uwedzere kunyatsoita kweako opakiti mutsara. Tinogona kupawo kudzidzisa uye mamwe masevhisi emunda kubatsira vashandi zvinobudirira kushanda nekuchengetedza chidimbu chimwe nechimwe chemidziyo.
Kuti udzidze zvakawanda nezve chero michina yatinotengesa, inzwa wakasununguka taura nesu chero nguva.
Otomatiki Spindle Kubata Machine
NPACK spindle cging Machine yakakodzera kune spindle screw cap, makiyi akavharwa, uye pfira mate uye zvichingodaro. Iyo mikapu inogona kuva esimbi, epurasitiki.
ZITA RINONZI NP-LC Yakazara otomatiki spindle capping muchina
chinzvimbo 0 ~ 200b / m （pasi pemabhodhoro uye cap size）
Bhodhoro uye cap diameter Φ20 ～ 120
Bottle Height 40 ~ 350mm
Spindle cging yemuchina dhizaini L1060 * W896 * H1620mm
Cap Kubatsira system Elevator anodyisa Vibrator kudya
divi L880 × W1000 × H2600mm 800 × 600 × 1700mm
Isu tinotora maitiro e'imwe mota inodzora rimwe capping vhiri ', izvo zvinogona kuve nechokwadi kuti muchina unoshanda mushe uye chengetedza inoenderana torque pasi penguva refu yekushanda mamiriro.
Mabhanhire anonamira anogona kugadziriswa zvakasiyana, izvo zvinobvumira muchina wacho kuve wakakodzera kumabhodhi emapuranga ane akakwirira uye akasiyana maumbirwo.
Kana ukasarudza yekusarudza cap inotungamira system pamwe nemuchina, iyo inozokwanisawo mapombi epombi.
Iyo iri nyore yekugadziridza kwekuvaka system inoshongedza chaiyo mutongi uye counter.
Iyo mainframe inogona kusimudzwa uye kuburitswa otomatiki nemota.
Npack otomatiki rotary capping (kuiswa chisimbiso) muchina kugadzirwa kutsva, kwakagadzirwa nekambani yedu makore apfuura Iyo inogadzirira yekumisikidza ndiro yenguva yekumhanya, yakafukidzwa neakaviri magineti nguva anotenderera misoro. Muchina unokwanisa mundima yemishonga, mishonga yekuuraya zvipuka, makemikari, chikafu nezvimwewo. Chaizvoizvo inyanzvi yekushandisa bhodhoro rekucheka, rinoshandiswawo kusimbisa aluminium cap, iyo ft proof cap, screw-thread cap, ROPP cap etc.
Ongorora: muchina uyu wakakodzera screw capping kune ese epurasitiki kapepa kana aluminium makapu kana shandura misoro yemapepa.
1.Iyo NP-PC otomatiki yekukora muchina yakagadzirirwa kuvhara mhando dzakasiyana dzemidziyo (yakaitwa yepurasitiki, girazi nesimbi) ine sikuru, pfuurira-mberi uye pilfer proof caps, ROPP nguwani. Muchina uyu unonyanya kukodzera kushandiswa mukugadzira chikafu, zvigadzirwa uye makemikari maindasitiri.
2.Muchina wacho unogona kuve nemhando dzakasiyana dzechivharo unscrambler (kudedera, kutenderera, mhando yebhanhire) zvichienderana nerudzi uye saizi yekapu. Zvekudyisa macaps mukapu unscrambler ma caps hopper anowanikwa.
3.Kuti kuisa mabote akaoma pamudziyo wemoya iwo "Puti uye Nzvimbo" system inogona kushandiswa.
Midziyo inoendeswa kune vhiri renyeredzi nenzira yekufambisa. Nyeredzi vhiri (indexing mhando yeimwe-musoro capper kana kuenderera kufamba kweakawanda-musoro capper) inotora midziyo yoenda nayo kune makapu anoisa chiteshi uye kupfuura kune yekuvhara musoro. Musoro wekuvhara unosimbisa cap ine torque inodiwa (kana musoro uri werudzi rwekumanikidza, unodzvanya chivharo chepamutsipa wehombodo nenzira yechirimo unit). Iyo torque inogona kuiswa pamusoro wekuvhara musoro nenzira yemagineti clutch. Mushure mekupedza kwekuvhara maitiro, iro vhiri renyeredzi rinofambisa mudziyo kuenda kunotevera chiteshi kudhinda dema diki chivharo, mushure meizvozvo nyeredzi vhiri rinofambisa iro mudziyo kune wekupedzisa zvigadzirwa conveyor.
mhando NP-PC-1 NP-PC-2
chinzvimbo 1800-3000 b / h 3000-4800 b / h
Cap inokodzera Screw caper, snap capper, aluminium makapu, ROPP makapu
Zvibereko zve cap 99%
divi 2000x1000x1500mm 2200x1000x1500mm
Kufunga musoro 1 2
Dzvanya musoro 1 2
Power kunwa 0.75KW 1.5KW
Kurema (kg) 600kgs 700kgs